सिद्धबाबा सुरुङमार्गको डिपीआर तयार, सरकारबाट १० अर्ब बढीको स्रोत सुनिश्चित – BikashNews
सिद्धबाबा सुरुङमार्गको डिपीआर तयार, सरकारबाट १० अर्ब बढीको स्रोत सुनिश्चित
२०७६ मंसिर १६ गते १६:२२ रमेश लम्साल
काठमाडौं । सिद्धबाबा नाम सुन्ने वित्तिकै बुटवल, पाल्पा, स्याङ्जा र गुल्मीका जनताले लामो स्वास फेर्छन् । वर्षा शुरु भएपछि त्यस सडकखण्ड भएर यात्रा नै गर्नु नपरोस् भन्ने ती जिल्लाका बासिन्दाको मनमा राम्रैगरी पर्छ । उपाय पनि थिएन ।
“पहिरोले कतिबेला कस्को जीवन खोस्ने हो ? को घाइते हुने हो भन्ने कुनै ठेगान थिएन । हामीले विभिन्न उपाय पनि अपनायौ, तर कुनै उपायले काम गरेन, अन्ततः सुरुङमार्ग नै उत्तम विकल्प हुने निष्कर्षमा पुग्यौं । लामो समयदेखिको मेहनतले सार्थकरुप लिन लागेको छ”, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय कार्यालयमा नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले भने ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वार्षिक बजेटको ७३ नम्बर बुँदामा “सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणको विस्तृत अध्ययन तथा परियोजना प्रस्ताव तयार पार्न बजेट विनियोजन गरेको छु”, भन्ने पदावली समेटियो । “त्यो शब्द राख्दा जति खुशी लागेको थियो, त्यो भन्दा बढी नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा त्यो शब्द पढ्दा मलाई बढी खुशी लाग्यो”, पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा महासचिव पौडेलले भने ।
पहिराका कारण दैनिकजसो नै सवारीसाधन रोकिँदा यात्रा गर्नेका लागि सो मार्ग मृत्यु मार्ग जस्तै बनेको यथार्थता भोग्नेलाई मात्र थाहा छ । पटक–पटक सरकार, मन्त्री, आयोजनाका प्रमुख र सडक विभागका उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत बदलिए ।
स्थानीयवासी सधैँ समस्यामा नै परिरहे । पहिरोमा परेका कतिका परिवार बिते, कति टुहुरा भए । अनि अपाङ्गताको जीवन अझै बाँचिरहेका पनि छन् । तिनलाई सरकार भएको र नभएको कुनै फरक परेन । सडकले जीवन लिएकाले समस्याबाट कहिले मुक्ति पाइएला भनेर बस्नुको विकल्प थिएन । किनकी राज्यले उनीहरुको दुःख देखेकै थिएन । देखेकै भए पनि अनुभव गरेको थिएन ।
बुटवल र पाल्पावासीका लागि सिद्धबाबा खण्ड एउटा नराम्रो यथार्थ जस्तै बनेको थियो । जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले सो सडक खण्डमा स्थानीयवासीले भोगेको समस्या समाधानका लागि सरकारले एउटा उपाय निकालेको महासचिव पौडेल स्मरण गर्छन् । बजेटमा समेत समावेश गर्यो । सो सडक खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सकियो भने स्थानीयवासीको समस्या समाधान हुनसक्छ भन्ने ध्येयका साथ गरिएको प्रयासले सार्थकता पाएकामा खुशी देखिन्छन् पौडेल ।
स्थानीयवासीको लामो समयदेखिको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ । सो सडकखण्ड भएर दैनिकयात्रा गर्ने यात्रुलाई सिद्धबाबाबाट कहिलेमुक्ति पाइएला भन्ने दशर्कांदेखिको सपना पूरा हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यही मङ्सिर २ गते सो खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बहुवर्षीय रुपमा खर्च गर्ने गरी रु १० अर्ब १५ करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएको छ ।
“स्रोत सुनिश्चित भएपछि अब केही प्राविधिक तयारीमा लाग्नुपर्छ । सडक विभागले विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गर्ला, सक्षम निर्माण व्यवसायी पनि छान्ला, हामी त्यसलाई समयमै अगाडि बढाउन थप सहजीकरण गर्छौ”, पौडेलले भने,“छिटो भन्दा छिटो स्थानीयवासीको समस्या समाधानका लागि हामी सरकारी निकायलाई काम गर्न अभिप्रेरित गर्छौ ।”
थानकोट–नागढुङ्गा सुरुङमार्गको शिलान्यास भइसकेको छ । सो आयोजनाको निर्माणकार्य शुरु हुन लागेकै बखत अर्थमन्त्रालयले सिद्धबाबा सडक खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले सो आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता भएको सहमतिपत्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पठाएको छ । यही मङ्सिर १ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिएका हुन् ।
सो पत्र मङ्सिर २ गते मात्रै अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पठाएको छ । “एउटा ठूलो प्रयासले सार्थकरुप लिएको छ । हामी सो सुरुङमार्गलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक पहलकदमी लिन्छौं, स्थानीयवासीले दैनिक भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्छौ”, पौडेलले भने।
सडक विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाका अनुसार त्यस मापदण्डले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी अब खरिद शुरु गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । स्वीस परामर्शदाताले सो सुरुङमार्ग निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारी विभागमा पेश गरिसकेको छ । डिपीआर पनि तयार भइसकेको र स्रोतसमेत सुनिश्चित भएपछि विभागले अब बोलपत्रमार्फत ठेकेदार छनोट गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने छ ।
अर्थ मन्त्रालयले डिपीआरबमोजिम हुने गरी डिजाइन, निर्माण तथा सञ्चालन र मर्मत गर्ने कार्यमा प्राविधिक सेवाको सुनिश्चित गरी लागत अनुमानबमोजिम खर्च हुनेगरी अनुमानित रकम मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश गरेको छ । सोही संरचनाअनुसार नै बहुवर्षीय ठेक्काबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति प्रदान गरिएको छ । “हामीले भन्दै आएको ढाँचामा नै स्रोतको सुनिश्चितता भएको छ”, प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।
सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि दोभानसम्मको करिब चार किलोमिटर क्षेत्र पहिराको अत्याधिक जोखिममा छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरी माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि रामापिथेकस पार्कसम्मको एक हजार ३०० मिटर क्षेत्रमा स्वीस सरकारको विकास सहयोगमार्फत सुरुङमार्ग निर्माणका लागि भौगर्भिक अध्ययन गरेको थियो ।
बुटवल– नारायणगढ सडक खण्ड थप चौडा हुँदैछ, दाउन्नेमा पनि सुरुङ मार्ग बनाउने गरी काम भइरहेको छ । हाल अध्ययनको क्रममा रहेको दाउन्नेखण्डको सुरुङमार्गले पनि केही समयभित्रै सार्थकरुप लिँदैछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने विषय समेत आफू अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा समावेश गरेको जानकारी दिँदै उहाँले ती सडक विस्तारको कामसमेत शुरु भएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरे । रासस